१८ दिन अघिमात्र विहे गरेर आएकी थिईन् २२ वर्षीकै उमेरमा सोमबार राति मृ’त्यु, एक्कासी विरामी भएकी उनी चितामा हराईन् ! – Dainik Samchar
१८ दिन अघिमात्र विहे गरेर आएकी थिईन् २२ वर्षीकै उमेरमा सोमबार राति मृ’त्यु, एक्कासी विरामी भएकी उनी चितामा हराईन् !
May 19, 2021 68
कोरोना संक्रमणबाट ढोरपाटनमा एक जनाको मृ’त्यु भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ५ सहीखोलाकी २२ वर्षीया महिलाको सोमबार राति मृ’त्यु भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ । कोरोनासँग मिल्दो जुल्दो लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा आएकी महिलाको बैशाख ३० गते स्वाब लिइएको थियो । स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्ने अवस्था नभएपछि पाल्पा रि’फ’र गरिएको थियो ।
पाल्पामा उपचाररत युवतीको गय राति मृ’त्यु भएको हो । गुल्मी घरभईकी उहाँ १८ दिन अघि विवाह गरेर सहीखोला आउनुभएको थियो । मृ’त्युपछि परिवारले गुल्मीको रिडीमा दा’हसं’स्का’र गरिसको छ । भने उहाँ मंगलबार रिपोर्ट पोजेटिभ आएको परिवारजनको भनाई छ । मृ’तक महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि स्थानीय स्तरमा स’चेत रहन आग्रह गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख करमती पुनले बताउनुभयो ।
महिलाको मृ’त्यु भएपछि सहीखोला टो’लमारहेका स्थानीयमा त्र’सि’त भएका छन् । स्थानीयको त’त्काल स्वाब संकलन गर्न मा’ग गरिएको बताइएको छ । बागलुङका कमल थापा विश्वकप छनोट खेलको राष्ट्रिय टोलीमा : इरा’क सँग मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनोट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घो’षणा गरिएको छ । जसमा बागलुङ भकुण्डेका कमल थापाले पहिलो पटक राष्ट्रिय टीममा स्थान बनाएका छन् ।
प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले गरेको २३ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणामा थापाले मिडफिल्डरको रुपमा महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेका छन् । थ्री नेसन्स कप उपाधि जित्न सफल टोलीबाट १३ खेलाडी परिवर्तन गर्दै प्रशिक्षक अलमुताइरीले टोली घोषणा गरेका हुन् । थ्री नेसन्स कप जित्दाका १० खेलाडीले मात्र राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सके । फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ र मिडफिल्डर सन्तोष तामाङले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गर्दा ६ खेलाडी पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा पर्न सफल भएका छन् ।
मिडफिल्डरमा बागलुङका कमल थापा सहित सुरज जिउ ठकुरी, गौतम श्रेष्ठ, आयुष घलान, मनिष डाँगी र गोलरक्षक विशाल सुनार पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका हुन् । फरवार्ड आशिष लामा र सुमन लामासँगै मिडफिल्डर पुजन उपरकोटी पनि टोलीमा फर्किएका छन् । प्रारम्भिक टोलीबाट प्रशिक्षक अलमुताइरीले ९ खेलाडीलाई बाहिर राख्दै अन्तिम २३ घोषणा गरेका हुन् । थ्री नेसन्स कपको टोलीबाट फरवार्डद्वय भरत खवास र दर्शन गुरुङ तथा डिफेन्डरद्वय रन्जित धिमाल र निशान खड्काले अन्तिम टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् ।
यस्तै थ्री नेसन्स कप जित्दाका सदस्य रवी पासवान पनि अन्तिम २३ मा परेका छैनन् । यसबाहेक पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा परेका विवेक बस्नेत पनि टोलीबाट बाहिरिएका छन् । नितिन थापा, सेसेहाङ आङदेम्बे र अमित तामाङले पनि अन्तिम टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् । यसअघि प्रशिक्षक अलमुताइरीले बन्द प्रशिक्षणमा ३२ खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्दा नेपाल सुपर लिग ९एनएसएल० विजेता काठमाडौं रेजर्सका कुनैपनि खेलाडी सुचिमा समावेश गरेका थिएनन् । थ्री नेसन्स कपका दौरान रेजर्समा आबद्ध ५ खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा थिए । एनएसएल च्याम्पियन टोलीका कप्तान एवं गोलरक्षक विकेश कुथुसँगै तेज तामाङ, संजोक राई, छिरिङ गुरुङ र त्रिदेव गुरुङ प्रारम्भिक छनोटमै नपरेका हुन् ।
नेपाल थ्री नेसन्स च्याम्पियन बन्दा रेजर्सकै प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्रिदेवले भने चोटका कारण एनएसएल गुमाएपछि उनको स्थानमा छिरिङ टोलीमा आएका थिए । थ्री नेसन्स खेल्ने टोलीबाट सुजल श्रेष्ठ र अजित भण्डारी पनि प्रारम्भीक छनोटमा परेका थिएनन् । प्रशिक्षक अलमुताइरीले प्रशिक्षण सुरु भएपछि एनएसएलका प्रदर्शनका आधारमा खेलाडी छनोट गरेको बताएका थिए । ‘यो टोली अब साफ च्याम्पियनसिपको तयारीलाई ध्यानमा राख्दै घोषणा गरिएको हो । केहि खेलाडी अहिलेको खेलमा पर्लान्, केहि अर्को खेलमा । हामी दिर्घकालिन योजनासहित टोली निर्माणमा लागेका छौं । को खेलाडी पर्यो भनेर हेर्नभन्दा टोली कति राम्रो बन्यो भन्नेमा ध्यान दिन जरुरि छ,’ अलमुताइरीले भनेका थिए ।
राष्ट्रिय टोलीले मे २९ मा इराकविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि जुन पहिलो साताबाट सुरु हुने विश्वकप छनोटका बाँकी खेल खेल्न नेपाल कुवेत प्रस्थान गर्नेछ । नेपालले विश्वकप छनोट अन्तर्गत तीन खेल खेल्न बाँकी छ । नेपालले जुन ३ मा चाइनिज ताइपेइ, जुन ७ मा जोर्डन तथा जुन ११ मा अष्ट्रेलियासँग खेल्नेछ ।
नेपाल अहिले अंक तालिकामा ३ अंक जोड्दै चौथो स्थानमा छ । नेपालको ५ खेलमा १ जित र ४ हारको नतिजा रहेको छ । समूहको पुछारमा रहेको ताइपेइको ५ खेलमा कुनै अंक छैन । अष्ट्रेलिया १२ अंक जोड्दै शीर्षस्थान तथा कुवेत र जोर्डनको १०(१० अंक छ । नेपालले चौथो स्थानमा रहन सके एसियन कप छनोटको तेस्रो राउन्डमा सोझै स्थान बनाउने अवसर रहनेछ । विश्वकपमा छनोट हुने नेपालको सम्भावना भने गणितीय रुपमा मात्र बाँकी छ ।
Prevकुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ११० मा झर्याे, मारमा किसान !